music player with parametric equalizer & surround အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
၏ဖော်ပြချက် music player with parametric equalizer & surround
အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ။ * Parametric equalizer ။
* Surround ။ Volume ပုံမှန်။ ။ * HQ resampler
MultiBand ညွှန်ပြချက် (အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှု)
OGG / Vorbis, mpeg1layer3 (mp3)၊ Musepack (mpc), FLAC, APE, WV (WavPack), AAC
* OpenSL ES (android ™ 2.3 နှင့်အထက်တွင်)
* AAudio (android ™ 8.1 နှင့်အထက်အသစ်တွင်)
AudioTrack Java level
* AudioTrack ဇာတိအဆင့် (အများဆိုင် API မဟုတ်သောကြောင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိပါ)
* NFSv3 ဆာဗာ ((/ etc / export) တွင် "လုံခြုံမှုမရှိသော" option ကိုလိုအပ်သည်။ ) (၀ င်းဒိုးအသုံးပြုသူများအတွက် unfs3 နှင့်အတူ cygwin ကို install လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ )
ကစားသမားသည်ပလက်ဖောင်းမှပေးသောအသံအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမသုံးပါ။ ထို့ကြောင့်ညီမျှခြင်းသည် (၅) ခု (သို့မဟုတ် 10 (သို့) ထို့ထက်ပို) band များရှိနိုင်သည်။ PEQ filter ကို အခြေခံ၍ bass booster ကို ပြုလုပ်၍ ၎င်းကို audio processing ကွင်းဆက်သို့ထည့်နိုင်သည် (သင်တူညီသော filter type အမျိုးအစားများစွာကိုထည့်နိုင်သည်။
Player သည် scrollable seekbar ကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည် audio record ရှည်လျားသော player ကိုအသုံးပြုရန်ကူညီသည် ( အသံဖမ်းစက်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော) SeekBar ကိုရှည်လျားသောကလစ်ဖြင့်ပြောင်းနိုင်သည်။
Player သည်အင်တာနက်ရေဒီယိုကိုပြန်လည်ဖွင့်နိုင်သည်။ အတွင်းပိုင်းဒေတာဘေ့စ်သို့ urls များကိုထည့် / တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
၁။ (PEQ) Parametric EQ (သင် band ကိုထပ်ဖြုတ်နိုင်သည်၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့် bandwidth ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်) သင်ထည့်သွင်းထားသော filter များအတွက် setting များကို load လုပ်နိုင်သည် (စာရင်းထဲတွင်ရှိ filter ကိုကြာရှည်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖွင့်သော menu မှပြုလုပ်နိုင်သည်) ။
2. (ရိုးရှင်းသောအသံ) ရိုးရှင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (Filter သည်သင်နားကြပ်ဖြင့်တေးဂီတကိုနားထောင်သည့်အခါပြင်ပစပီကာများမှနားထောင်ခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်) (3D အသံ) ။ (ဖွံ့ဖြိုးဆဲ filter) ။
3. (Volume ပုံမှန်) စစ်ထုတ်ခြင်း ဒက်နစ်အကွာအဝေးကိုချုံ့သည်။
သီချင်းများကိုဆူညံသောနေရာများတွင် (ဘတ်စ်ကား၊ ရထားနှင့်စသည်ဖြင့်) နားထောင်သောအခါအသုံးဝင်သည်။
သင်သတ်မှတ်နိုင်သည် သူသည်သင့်အတွက် filter ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်သင့် configuration များကိုသိမ်းဆည်းသည်။
1 ။ (MBI) Multiband Indicator ('90s' တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် stereo စနစ်များတွင် multi-band ညွှန်ပြသည်နှင့်တူသည်။ ) MBI ကိုကလစ် လုပ်၍ အနီးဆုံးယခင် PEQ settings ကို MBI ဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။ အဓိကမျက်နှာပြင်။
1 ။ အသံချိန်ညှိချက်များကိုထိန်းချုပ်သော application ကိုပိတ်ထားပါ။ အသံတွေပိုဆိုးလာတယ်။ ၂ ။ အသံအထူးပြုလုပ်ချက်များကိုဤကစားသမားမှသာတင်ပြသည် (အထူးသဖြင့်အခြားကစားသမားများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိပါ) ။
3 ။ အချို့သော audio output plugins များသည်ကိုယ်ပိုင် API (Native AudioTrack *) ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်သည် (သို့သော်၎င်းသည် OpenSL ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သည်)
ဘာအသစ်လဲ music player with parametric equalizer & surround 0.19.1.1
Nafasi by Equalizer